डा. महेशसिंह श्रेष्ठ
केही दिनमा रुसमा रहेका अन्य नेपालीले समेत खोप लगाउने डा. श्रेष्ठले बताए ।
बार्सिलोना – रुसले गत अगष्टमा परीक्षणको क्रममा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)विरूद्धको खोपलाई विश्वको पहिलो खोप दाबी गरेको थियो । त्यहाँ बस्ने एक नेपालीले रुसको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको यो खोप लगाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
भेक्टर भ्याक्सिन माइनस ८० डिग्री सेन्टिग्रेडमा फ्रिज गरिन्छ । त्यो निकालेर डिफ्रिज गरेर झोल बन्न झण्डै २० मिनेट लाग्छ । यसलाई राख्नका लागि त्यस्तै खालको रेफ्रिजेसन सुविधा हुनुपर्छ । पहिलाको खोपमा त्यस्तो हुने थिएन । नेपालको परिफ्रेक्षमा यसको प्रयोगका लागि केही झन्झट हुन सक्ने डा. श्रेष्ठको बुझाइ छ ।